नेपाल घुम्न आएकी अल्मुन्नाहर अन्नीले विमानभित्र जे देखिन् |
|| Follow us
नेपाल घुम्न आएकी अल्मुन्नाहर अन्नीले विमानभित्र जे देखिन्
07:58:07 | Uncategorized
म बंगलादेशी हुँ । मेरो घर राजधानी ढाकामा पर्छ । मेरो विवाह भएको करिब तीन वर्ष भयो । हाम्रो सानो बच्चा पनि छ ।
नेपालको सौन्दर्यबारे मैले पढेकी थिएँ । नेपाल घुमेर आएका साथीहरूले पनि मेरोसामु धेरै वर्णन गरेका थिए । त्यसैले म नेपाल घुम्न आतुर थिएँ । परिवारसँग नेपाल घुम्ने सल्लाह भयो । अरू साथीहरूसँग पनि सल्लाह भयो । अन्ततः हामी नेपाल आउने तय भयो, मार्चको दोस्रो साता । नेपाल आउने चाहना राख्ने त अरू पनि थिए, तर उनीहरूको समय मिलेन । अन्तिममा म, मेरो बच्चा र श्रीमान्सहित अन्य दुईजना नेपाल आउने निर्णयमा पुग्यौँ । सात दिनसम्म नेपाल घुम्ने उद्देश्यले हामी सोमबार ढाकाबाट नेपालका लागि उड्यौँ । नेपालमा काठमाडौं र पोखरा घुम्ने हाम्रो योजना थियो । यसका लागि हामीले सात दिनको छुट्टी लिएका थियौँ ।
नेपाल आउन पाउँदा निकै उत्साहित थियौँ । जहाजमा चढेपछि कतिवेला नेपाल पुगिएला भन्ने कौतूहल मनमा थियो । केही घन्टाको जहाज यात्रापछि डाँडाकाँडा देखियो । हिउँले ढाकिएका पहाड देखिए । निकै रोमाञ्चित भएर त्यसलाई नियालिरह्यौँ ।
जहाजभित्र काठमाडौं आइपुगेको ‘अनाउन्स’ भयो । हामी थप रोमाञ्चित भयौँ । जहाज अवतरण गर्न तल–तल झर्‍यो । काठमाडौंका घर देखिए । पछि विमानस्थलको रनवे देखियो । तर, जहाज रन वेतर्फ गएन । मनमा चसक्क पस्यो । जहाज घुम्यो । केही बेरपछि फेरि रेनवे देखियो । तर, जहाज सही दिशामा थिएन ।
जहाज एक्कासि बजारिएको आवाज आयो । जहाजभित्रका सबै आत्तिए । कोही कराउन लागे । कोही चिच्याउन लागे । जहाजभित्र डढेको गन्ध आउन थाल्यो । तर, जहाज रोकिएको थिएन । सिट बेल्ट बाँधिएकाले कोही हिँडडुल गर्न पनि सकेको थिएन । तर, सबै चिच्याइरहेका थिए ।
केही बेरमा जहाज रोकियो । जहाजमा आगो दन्किएको देखियो । जहाजभित्र यात्रुको भागदौड मच्चियो । सबैले गुहार माग्न लागे । कोही रुन थाले । कोही कराउन थाले । मसँगै हुनुहुन्थ्यो मेरा श्रीमान् र काखमा थियो सानो बच्चा । सिट बेल्ट बाँधिएकाले हामी कहीँ जान सकिरहेका थिएनौँ । तर, अरूले भने सिट बेल्ट खोलेर जहाजभित्रको इमर्जेन्सी ढोका खोल्दै थिए । कोही जहाजभित्रैबाट सिसा फुटाइरहेका देखिन्थे ।
हामी भने केही गर्न सकिरहेका थिएनौँ । तर, जहाज झन्–झन् दन्कँदै थियो । के गर्ने केही मेसो पाउन सकिरहेका थिएनौँ । बच्चा काखमा च्यापिरहेकी थिएँ । आगो दन्किँदै झन्–झन् नजिक आउन थाल्यो । डरले म सिटमै बसिरहेँ । यत्तिकैमा मेरो हात कसैले तान्यो । त्यसवेलासम्म म अर्धचेत अवस्थामा पुगिसकेकी थिएँ । त्यसपछि के भयो, मैले केही मेसो पाउन सकेकी छैन ।
अहिले म अस्पतालको बेडमा छु । मेरा श्रीमान् र बच्चा हराइरहेका छन् । मैले सबैलाई सोधेँ । तर, कसैले पनि उत्तर दिएका छैनन् । सबैले ‘मिसिङ’ मात्रै भनिरहेका छन् । उनीहरू कहाँ छन् ? मलाई केही थाहा छैन । मसँगै आएका अन्य दुई साथी भने सकुशल भएको खबर पाएकी छु ।
म्याद नाघेका पेय पदार्थ नस्ट गरियो
डा. विष्टद्धारा ३ लाखको अक्षय कोष स्थापना
फेसबुकमा अपशब्द प्रयोग गर्ने धादिङे इटहरीबाट पक्राउ
हटाइए रातो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी
खुल्ला दिसामुक्त वडा घोषणा कागजमा मात्र सीमित
भू-उपयोग नीति नहुँदा स्थानीय सरकारमा अन्याैलता
अर्जुनधारा नगरपालिकाकाे सार्वजनिक सुनुवाई
बाढीले ट्याङ्की पल्टाउँदा भलुवामा खानेपानीको समस्या
सुरूङमा मजदुरकाे मृत्यु भएको मैले भनेकै छैनः डिएसपी मगर
पाँच किलोमिटर नहर बनाउन डेढ करोड खर्च
ग्राभेल सडक भत्किन थालेपछि नेपाल– भारत आवत जावतमा समस्या
पूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थको कृतिम अभाव
मापदण्ड विपरित सडक ग्राभेल
मोरङमा असी घर हस्तान्तरण
आज धरानमा महाविर पुनसँग अन्तरक्रिय हुने
भेडेटारमा बस दुर्घटनामा ३४ यात्रु घाइते
युएनएचसीआरबाट सौर्य वत्ती र खानेपानी
नमस्ते झरनामा ढुङगा खस्यो,एक युवाको मृत्यु
हाेटलबाट यौनकर्मी सहित सात जना पक्राउ
धरानको भानुचौकमा ग्याङ फाईट (भिडियो सहित)
Blastkhabar.com-ब्लाष्ट टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक
धरान उपमहानगरपालीका –१५ पुष्पलाल मार्ग
समाचार शाखा ः०२५–५३३४३५
© 2016.All rights reserved by blastkhabar.com